भूकम्पप्रभावितहरूलाई बिर्सिएजस्तो छ - जनताको आवाज - साप्ताहिक
भूकम्पप्रभावितहरूलाई बिर्सिएजस्तो छ
वैशाख २७, २०७३
भूकम्पप्रभावितहरूलाई धेरैले बिर्सिएजस्तो छ । कुनै पनि दल, कार्यकर्ता तथा अन्य निकायले यतातिर ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन । टहरामा रात बिताइरहेका नेपालीहरूको संवेदना सबैले बुझिदिनुपर्छ ।
देशका हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, अनिमियतता, गैरजिम्मेवारिपन आदिको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।
कालोबजारी तत्काल हट्नुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी यही मौलाइरहेको छ ।
नाकाबन्दी खुले पनि बजारमा चरम अभाव छ भने कालोबजारी मौलाएको छ । व्यवसायीहरू जनताको ढाड सेकिने गरी आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् । कालोबजारी र अभाव किन नियन्त्रण भएन ? यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकार किन मौन छ ? जनतालाई जवाफ चाहियो ।
खुट्टामा लगाउने जुत्ता–चप्पल शोकेसमा सजाएर, एसीमा राखिन्छ तर फलफूल र तरकारीलाई चाहिँ फुटपाथको धूलो–धूवाँमा फिँजाइन्छ अनि कसरी सप्रियोस् त हाम्रो स्वास्थ्य ?
प्रकाशित :वैशाख २७, २०७३